Fantatra tamin’izany fa fifanaraham-piaraha-miasa mazava sy voarakitra an-taratasy no tanterahiny amin’ireo tantsaha mpamboly izay mifanohana aminy. Anisan’ny voarakitra ao anatin’ny bokin’andraikitr’ireo tantsaha mpamboly katsaka hampiasain’ity orinasa ity ny fanajana ny tontolo iainana. Tsy mandray vokatra azo avy amin’ny fanimbana ny tontolo iainana izy ireo na avy aiza na avy aiza. Hisy ny fanadihadiana momba ny faritra voaharo hotanterahin’izy ireo ao Menabe Antimena izay iarahana amin’ireo mpanao fanadihadiana tsy miankina. Havoaka ampahibemaso aorian’izay ny vokatra azo mba hahafantaran’ny rehetra ny tena marina. Tsiahivina fa vokatry ny fitombon’ny mponina ao Antimena no antony iray niteraka ny fahasimban’ny ala tao an-toerana niampy ny afo. Mirefy 44 600 ha ihany anefa no tany azo trandrahina ao an-toerana. Hifanohana amin’ny orinasa amin’ny fiarovana izany ny Ong Fanamby sady hanome fiofanana ireo olona eny ifotony.